၂၀၂၂ခုနစ် တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း – စှယျစုံသုတ
၂၀၂၂ခုနစ် တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း
ဤနှစ် (14. 4. 2022) မှ စ၍ မိမိလုပ်ကိုင်ချင်သော ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန် ခက်ခဲတတ်သည်။ တပည့်ကျေးကျွန်များ တလွဲတချော် ပြုလုပ်တတ်သည်။ ညီအစ်ကို မောင်နှမများအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်တတ်သည်။ နှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိူးသားချင်းနှင့် မိတ်သဂ်ဟများ ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းများ ခံစားရမည်။
ပျိူရွယ်သူများ ဖူးစာရှင်အသစ်နှင့် တွေ့ပြိး စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းများ ရှိမည်။ သို့သော် အလောတကြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းများ မကောင်းပါ။ ပျိူရွယ်သူများ ဝေးကွာနေသူများနှင့် ပြန်လည်ဆုံစည်းရကိန်း ရှိသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ သားသမီးများ၏ သတင်းထူးများ ကြားရမည်။
ကျန်းမာရေးတွင် အစား၊ အူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်းရောဂါများ ခံစားရတတ်သည်။
အထူးဟော… စိတ်လောကြီးပြိး တစ်ပါးသူ၏ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှောင့်သင့်၏။ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အဂ်ါနှင့် ကြာသပတေးသားသမီးများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ အထူးဂရုစိုက်ပေးပါ။
တောင်အရပ်သို့ ရေလမ်းခရီးသွားခြင်းနှင့် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဝယ်ယူခြင်းများ ရှောင်ကျဉ်ပေးပါ။
ငွေကြေး ကိစ္စများရပ်များတွင် တာဝန်ခံခြင်း၊ အာမခံခြင်းများ မကောင်းပါ။ အပေါင်းအသင်းနှင့် အပျော်အပါး လိုက်စားခြင်းများ အထူးရှောင့်သင့်၏။
အကျိူးပေးအက္ခရာ – (က. သ. ပ. အ), အကျိူးပေးဂဏန်း – (၉. ဝ. ၇. ၂), အကျိူးပေးအရောင် – အနီရောင်၊ ကြည်ပြာရောင်၊ အညိုရောင်၊ လိမ္မာရောင်. အကျိူးမပေးနေနံ – (အဂ်ါ၊ ကြာသပတေး), အကျိူးမပေးအရပ် – တောင်အရပ်
ယတြာ – မိမိနေနံဂြိဟ်ဘုရား တနဂ်နွေ့နံတွင် မိမိမွေးနေ့မှ သပြေညွန့်၊ ကံကော်ညွန့်၊ ပေါက်ညွန့်၊ ဂန္မာပန်းအဖြူရောင် (၅) ညွန့်စီ အားလုံးစုပေါင်းပြိး မြေအတာအိုးဖြင့် ဘုရားတွင်ကပ်လှူ၊ ဖယောင်တိုင် (၅) တိုင်၊ အမွှေးတိုင် (၅) တိုင် ထွန်းပူဇော်၊ ရေတော်သက်စေ့ လောင်းသပ္ပါယ်၊ ငှက်ပျော်ရွက်ခံပြိး ဇီယို၊ ဖရုံယိုများ ဆွမ်းကပ်၍ လိုရာဆုတောင်းပါ။
#Credit : ဆရာကြီးမင်းသူရ အစီအမံယတြာ 09- 751089826/ 09- 767817917
၂၀၂၂ခုနဈ တနင်ျဂနှေ သားသမီးမြားအတှကျ တနှဈစာ ဟောစာတမျး
ဤနှဈ (14. 4. 2022) မှ စ၍ မိမိလုပျကိုငျခငျြသော ကိစ်စမြား ဆောငျရှကျရနျ ခကျခဲတတျသညျ။ တပညျ့ကြေးကြှနျမြား တလှဲတခြျော ပွုလုပျတတျသညျ။ ညီအဈကို မောငျနှမမြားအကွား ပဋိပက်ခဖွဈတတျသညျ။ နှဈဖကျမိဘဆှမြေိူးသားခငျြးနှငျ့ မိတျသဂျဟမြား ကူညီထောကျပံ့ပေးခွငျးမြား ခံစားရမညျ။
ပြိူရှယျသူမြား ဖူးစာရှငျအသဈနှငျ့ တှပွေိ့း စစေ့ပျကွောငျးလမျးမြား ရှိမညျ။ သို့သျော အလောတကွီး ဆောငျရှကျခွငျးမြား မကောငျးပါ။ ပြိူရှယျသူမြား ဝေးကှာနသေူမြားနှငျ့ ပွနျလညျဆုံစညျးရကိနျး ရှိသညျ။ အိမျထောငျရှငျမြား သားသမီးမြား၏ သတငျးထူးမြား ကွားရမညျ။
ကနျြးမာရေးတှငျ အစား၊ အူလမျးကွောငျးရောဂါ၊ ဦးနှောကျနှငျ့ အာရုံကွော၊ အဆဈအမွဈကိုကျခဲခွငျးရောဂါမြား ခံစားရတတျသညျ။
အထူးဟော… စိတျလောကွီးပွိး တဈပါးသူ၏ လုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျခွငျး ရှောငျ့သငျ့၏။ လုပျငနျးလုပျဆောငျရာတှငျ အဂျါနှငျ့ ကွာသပတေးသားသမီးမြားဖွငျ့ ဆောငျရှကျခွငျးမြား အထူးဂရုစိုကျပေးပါ။
တောငျအရပျသို့ ရလေမျးခရီးသှားခွငျးနှငျ့ အိမျ၊ ခွံ၊ မွေ ဝယျယူခွငျးမြား ရှောငျကဉျြပေးပါ။
ငှကွေေး ကိစ်စမြားရပျမြားတှငျ တာဝနျခံခွငျး၊ အာမခံခွငျးမြား မကောငျးပါ။ အပေါငျးအသငျးနှငျ့ အပြျောအပါး လိုကျစားခွငျးမြား အထူးရှောငျ့သငျ့၏။
အကြိူးပေးအက်ခရာ – (က. သ. ပ. အ), အကြိူးပေးဂဏနျး – (၉. ဝ. ၇. ၂), အကြိူးပေးအရောငျ – အနီရောငျ၊ ကွညျပွာရောငျ၊ အညိုရောငျ၊ လိမ်မာရောငျ. အကြိူးမပေးနနေံ – (အဂျါ၊ ကွာသပတေး), အကြိူးမပေးအရပျ – တောငျအရပျ
ယတွာ – မိမိနနေံဂွိဟျဘုရား တနဂျနှနေံ့တှငျ မိမိမှေးနမှေ့ သပွညှေနျ့၊ ကံကျောညှနျ့၊ ပေါကျညှနျ့၊ ဂန်မာပနျးအဖွူရောငျ (၅) ညှနျ့စီ အားလုံးစုပေါငျးပွိး မွအေတာအိုးဖွငျ့ ဘုရားတှငျကပျလှူ၊ ဖယောငျတိုငျ (၅) တိုငျ၊ အမှေးတိုငျ (၅) တိုငျ ထှနျးပူဇျော၊ ရတေျောသကျစေ့ လောငျးသပ်ပါယျ၊ ငှကျပြျောရှကျခံပွိး ဇီယို၊ ဖရုံယိုမြား ဆှမျးကပျ၍ လိုရာဆုတောငျးပါ။
#Credit : ဆရာကွီးမငျးသူရ အစီအမံယတွာ 09- 751089826/ 09- 767817917
“ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြားအတှကျ ၂၀၂၂ခုနဈ တဈနှဈစာဟောစာတမျး…”
ဆရာလင်းညို့တာရာရဲ့ ဟောချက်ထဲက နံပါတ် ၁၀ ၁၄ တကယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီ
“စနသေားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာကံကွမ်မာ (၁၂.၁.၂၀၂၂...
“ကွာသပတေးသားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာကံကွမ်မာ (၁၂.၁...
“ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာကံကွမ်မာ (၁၂.၁...
“အင်ျဂါသားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာကံကွမ်မာ (၁၂.၁...
“တနင်ျလာသားသမီးမြား အတှကျ တဈပတျစာကံကွမ်မာ (၁၂.၁...
“တနင်ျဂနှသေားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာကံကွမ်မာ (၁၂...